Maxey u badan tahay in aaladaha elektiroonigga ah ay u isticmaalaan jaakadaha 3.5mm? -News-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co., Ltd.
Maxay Qalabka Qalabka elektaroonigga ah badankood u adeegsadaan jaakadaha 3.5mm?
Waqtiga: 2020-07-16 Hits: 17
Sidee ayay shirkado badani u go'aansadeen isla deked loogu talagalay maqalka aaladooda? Wadamadan iyo shirkadahan si lama filaan ah go’aansaday inay is waafaqaan midba midka kale ka mid ah? Waa maxay sirta ka dambaysa aqbalitaanka ballaaran ee loo yaqaan '3.5mm jack'?
Asalka of jaakada maqalka ee 3.5 mm
Asalka jaakada 3.5mm ayaa laga raadsan karaa ilaa 19kath century. Back in 1878, a predecessor to the 3.5mm jack, a 6.35mm jack (also called the ¼” inch jack) was developed as a ‘phone connector’ used by telephone operators to direct calls manually. Back then, you couldn’t just dial a number and be connected straight away. You had to speak to an actual person (the operator) and request that they connect your call forward.
Caannimada leh daloolka 3.5 mm
Horraantii 20th qarnigii la soo dhaafay ayaa la arkay imaatinka iyo ansaxinta baahinta raadiyaha. Reedyowga ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee ay ka helaan muusiga rubuc-inji ah rubuc-inji isticmaal ahaan muusikada. Qoys walba wuxuu u duulay bakhaarka ugu dhow ee elektaroniga ah si uu gurigooda ugu keeno mashiinka muusikada. Dadkoo dhan oo ka kala socda qaybaha kaladuwan ee nolosha, min guryaha raaxada ee New York ilaa guryo waaweyn oo leh dhabarkooda, ayaa heesaha ka dhawaaqi jiray raadiyaha, iyadoo qaarna xitaa ay illaa hadda wada hadal la galayaan!
Baahida qaaliga ah ee raadiyaha ayaa loo oggol yahay in jileeyaha saddex-inji ah uu noqdo sharciga cusub ee ku saabsan dib-u-ciyaar maqal. Hadana, ma ahayn ilaa dabayaaqadii 20th qarnigii in dadwaynuhu aqbaleen jawiga casriga ah ee 3.5mm loogu talagalay khibradda dhagaysiga muusikada.
Sannadkii 1979-kii, Sony waxay aliftay Walkman, oo kacdoon ku sameeyay warshadaha muusikada la qaadan karo. Waxay ahayd iPod ka hor inta uusan iPod jirin. Iyada oo loo eegayo si ay uga sii fududaato, Sony waxay isticmaashay jaakad yar oo 3.5mm ah, oo markii ugu horreysay loo adeegsaday istudiyaha raadiyaha ee Jabaan. Qof walba oo ka socda ardayda kulleejyada ilaa howlgab ayaa Sony Walkman dhegahooda ku xirey. Waxay ahayd rabitaankan walxaha qarxa ee Walkman ee u oggolaaday sumcadda weyn ee loo yaqaan '3.5mm jack'. Intaa waxaa sii dheer, tikniyoolajiyadda loo adeegsaday dekeddii 3.5mm ee 1979 ilaa iyo maanta wali si weyn iskama badalin.
Sidee buu u shaqeeyaa qalabka codka maqalka leh ee 3.5 mm?
Jalaatada 3.5mm ee aan si aad ah u isticmaalno maanta ayaa farsamo ahaan loogu magacaabaa iskuxirka TRS (Tip Ring Sleeve). Tilmaanta, giraanka iyo guntada gacantu waa saddex qaybood oo muhiim u ah jaakadda. Kuwan waxaa lagu calaamadeeyay hoosta:
Furaha ayaa u gudbiya hada ku hadasha dhanka bidix ee hadalka / dhagaha dhegta, giraanku wuxuu u gudbiyaa dhanka midigta hadalka / qalabka dhegta, gacankuna wuxuu salka ku hayaa dekada. Xirmooyinka madoow ee u dhexeeya waxaa lagu magacaabaa grommets gooni u goosad, taas oo hubineysa inaysan jirin isku-dhafka codka ah ee u dhexeeya kanaalada midig iyo bidix. Haddii aad fiiro gaar ah leedahay, qaar ka mid ah jaakadaha 3.5mm waxay leeyihiin hal grommet gooni ah, qaar waxay leeyihiin laba, halka qaarna ay xitaa la imaanayaan saddex. Hal grommet gooni u ah micnaheedu waa isku-xirku wuxuu la imanayaa kaliya caarada iyo shaashadda oo aan lahayn giraanta, taas oo horseedaysa soo-saarka dhawaq birta ah. Haddii aad lahaan laheyd sameecado dhagaha oo hal giraan ah, waxaad aasaasi u yeelanaysaa dhawaq ka imanaya kaliya maqalka dhagaha. Xirmooyinka hal-grommet-ka ah ayaa marka hore loo isticmaalaa gitaarka.
Xianglong 3.5mm telefoon gacmeedka maqalka ah
Hore: Qaabdhismeedka Iskuxiridda Khilaafaadka
Xiga: Sidee U shaqeeyaan Telefoonada Awoodda leh?